Ahoana no ahitako ny iPhone amin'ny solosaina? Ny fomba mora indrindra! - Iphone
tadiavo ny fidiran'ny solosaiko iphone
iphone fanavaozana ny toe-javatra mpitatitra
iphone 7 plus earpiece tsy mandeha
iphone olana mampifandray amin'ny wifi
Ahoana no ahitako ny iPhone amin'ny solosaina? Ny fomba mora indrindra!
Ataonao akaiky ny namanao ary ny iPhone akaiky anao. Na mitandrina tsara aza ianao dia mety tsy ho hita ny iPhone-nao. Na very ao anaty antontam-panasan-damba izy na mandeha mamaky ny tanàna ao anaty Uber dia tsara ny mahafantatra ny fomba hahitana ny iPhone-nao amin'ny solosaina. Ato amin'ity lahatsoratra ity dia hasehoko anao ny fomba fampiasana Find My iPhone avy amin'ny solosaina mba hahitanao ny iPhone tsy hita eo noho eo.
Inona no mahita ny iPhone-ko?
Ny Find My iPhone dia mamela anao hahita ny iPhone, Mac, iPad, iPod, na Apple Watch anao rehefa very na nangalarina izy ireo. Azonao atao ny mahita azy ireo mampiasa ny Mitadiava iPhone fampiharana ao amin'ny iPhone, iPad, na iPod anao, na azonao atao ny mampiasa ny solosainanao hitadiavana ireo fitaovanao - izany dia ao anatin'ny iray segondra.
Ahoana no fomba fiasa mahita ny iPhone-ko?
Find my iPhone miasa amin'ny alàlan'ny fampiasana Serivisy toerana (ao anatin'izany ny GPS, tilikambo sela, sy maro hafa) amin'ny iPhone hanehoana ny toerana misy ny iPhone amin'ny sari-tany. Misy fiasa mahafinaritra hafa hita an-tserasera izay afaka manampy anao hahita na hiaro ny iPhone-nao. Fa bebe kokoa momba ireo ao anatin'ny iray minitra.
Ahoana no fomba fampiasako mahita ny iPhone avy amin'ny solosaina?
Raha hampiasa Find my iPhone amin'ny solosaina dia mandehana icloud.com/find ary miditra amin'ny Apple ID sy ny teny miafinao. Hiseho amin'ny sari-tany ny fitaovanao rehetra. paompy Fitaovana rehetra eo an-tampon'ny efijery hijerena ny lisitry ny fitaovana rehetra nanodina ny Find My iPhone ary mifandray amin'ny Apple ID anao. Tsindrio ny anaran'ny fitaovana tsirairay hitendrena feo, apetaho amin'ny fitaovana very na hamafana ny fitaovanao.
Raha vantany vao tafiditra ianao dia hahita sarintany misy teboka maitso izay mampiseho aminao ny toerana manodidina ny iPhone, iPad, na iPod anao. Raha mbola apetraka araka ny tokony izy, ny serivisy dia miasa amin'ny fitadiavana ny solosainao Apple Watch na Mac. Tena mahavariana izany!
Andraso! Jereo fa tsy mandeha ny iPhone-ko!
Raha te hiasa ny iPhone-ko dia misy zavatra roa tokony hitranga:
iphone 6 dia milaza hatrany fa mitady
1. Tadiavo ny iPhone-ko tsy maintsy alefa amin'ny iPhone, iPad, na iPod-nao
Azonao atao ny manamarina raha mahita an'ity iPhone ity amin'ny alàlan'ny fandehanana any Fikirana -> iCloud -> Tadiavo ny iPhone .
Amin'ity menio ity dia alao antoka fa nirehitra ny switch eo akaikin'ny Find My iPhone. Raha tsy izany dia kitiho fotsiny ny switch. Tokony ho maitso izy io, mampahafantatra anao fa afaka izy io.
Raha mbola eo ianao, dia tena mamporisika anao hiezaka ny hamindra ny toerana farany. Io dia ahafahan'ny iPhone-nao mandefa ho azy an'i Apple ny toerana misy ny iPhone anao rehefa mihena ny bateria. Amin'izany fomba izany, na dia maty aza ny bateria dia azonao atao ny mamantatra hoe aiza ny iPhone-nao (raha mbola tsy misy mamindra azy!).
2. Tadiavo ny iPhone-ko tsy maintsy halefa ao amin'ny Services Services
Raha hita eo amin'ny iPhone-nao ny Find My iPhone ary misy an-tserasera saingy mbola tsy mandeha ihany ny Find My iPhone dia zahao ny vakizoro Serivisy misy anao Tokony halefa amin'ny Find My iPhone ny Serivisy Toerana. Raha hijery an'ity dia mandehana any Fikirana -> Tsiambaratelo -> Serivisy toerana . Kitiho ny lisitry ny fampiharana mandra-pahatonganao mahita iPhone. Ity dia tokony hapetraka ao amin'ny Fampiasana ny App. Raha tsy izany dia kitiho ny Find iPhone ary safidio mandritra ny fampiasana ny fampiharana. Voila!
Fampiasana Find my iPhone On iCloud.com
Jereo ihany ny iPhone avy amin'ny solosaina raha tsy amin'ny Internet ny iPhone. Raha tsy izany dia hanana teboka volondavenona eo akaikin'ny toerana fantatra farany an'ny iPhone ny tranokala iCloud. Azonao atao ny manangana ny programa mba hilaza aminao amin'ny manaraka fa mandeha amin'ny Internet ny iPhone tsy hita. Kitiho fotsiny ny Fitaovana rehetra midina menio, ary safidio ny iPhone.
Ankehitriny dia tokony hisy boaty eo amin'ny zoro ankavanan'ny ambony amin'ny fikandrana fitetezana. Eo no mitranga ny majia. Raha ivelan'ny Internet ny iPhone-nao dia azonao atao ny manamarina ilay boaty eo akaikin'ny misy azy Ampahafantaro ahy rehefa hita .
Io boaty io ihany dia misy safidy mahafinaritra hafa. Azonao atao ny manangana fanairana amin'ny iPhone amin'ny pejin-tranonkala fitetezana. Safidio fotsiny Play Sound .
Raha tsy very ao anaty sezalà fandriana ny iPhone-nao ary tsy manampy anao hahita azy ny fanairana dia azonao atao ny mampiasa an'ity tranonkala ity hametraka ny iPhone-nao Very Mode . Ny Lost Mode dia mamela anao hampiseho laharana fifandraisana hafa amin'ny efijery iPhone, ka raha misy mahita azy dia afaka averiny aminao izy io.
Fa raha tsy manampy ireo endri-javatra rehetra ireo, na mieritreritra ianao fa mety nisy naka ny iPhoneo dia afaka mamafa ny iPhone amin'ny pejy mitovy ianao. Safidio fotsiny Fafao ny iPhone .
iphone x hery bokotra tsy mandeha
Fantatrao izao ny fomba fampiasana Find My iPhone avy amin'ny solosaina
Amin'ny manaraka dia tsy hita ilay namanao nomerika akaiky indrindra, manantena aho fa hanampy ity fampianarana ity! Ny fampiasana Find My iPhone avy amin'ny solosaina dia fomba iray mora hitazonana ny iPhone azo antoka ary alao antoka fa tafaraka amina tantara kely araka izay azo atao ianao.
Diso toerana ve ny iPhone-nao taloha? Ny fampiasana Find My iPhone avy amin'ny solosaina ve no nahavonjy ny andro? Lazao anay izany ao amin'ny fizarana fanehoan-kevitra etsy ambany. Tianay ny mihaino anao!